२०७६ चैत्र ३ गते सोमबारको रशिफल - Cherwant Khabar
Read Time:9 मिनेट, 8 सेकेन्ड
वि.सं. २०७६ चैत्र ०३ गते । सोमवार । इ.स.२०२० मार्च १६ तारिक । शकसंवत् १९४१ । परिधावी संवत्सर । उत्तरायण । वसन्त ऋतु । ने.सं. ११४० सिल्लागा । चैत्र कृष्णपक्ष । तिथी-सप्तमी,०९ बजेर १८ मिनेट उप्रान्त अष्टमी ।
नक्षत्र– ज्येष्ठा,१६ बजेर ४४ मिनेट उप्रान्त मूल । योग– सिद्धि,१८ बजेर ४७ मिनेट उप्रान्त व्यातिपात । करण– बव,०९ बजेर १८ मिनेट उप्रान्त बालव,२० बजेर ४४ मिनेट उप्रान्त कौलव ।
आनन्दादिमा पद्य योग । चन्द्रराशि–वृश्चिक,१६ बजेर ४४ मिनेट उप्रान्त धनु । काठमाडौंमा सूर्योदय ६ बजेर १४ मिनेटमा, सूर्यास्त १८ बजेर १२ मिनेटमा । दिनमान २९ घडी ५४ पला । अष्टमी व्रत । गोरखकालीपूजा ।
व्यवसायमा लगानी गरेपनि समयमा प्रतिफल प्राप्त नहुँदा आर्थिक शंकटको सामना गर्नुपर्ला । आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै हुनाले दैनिकी प्रभावित हुनेछ ।
नचाहाँदा नचाहाँदै तपाईको बोलिले अरुको मन दुख्नेछ । सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला नराम्रा घटनाहरु घट्न सक्नेछन् । साँझबाट समय राम्रो रहेकोले पढाई लेखाईमा मन जाने तथा नतिजा आफैँतिर ल्याउन सकिनेछ ।
विद्या तथा कुनैपनि प्रतिस्पर्द्धामा प्रतिस्पर्द्धीहरुलाई किनारा लगाउँदै नतिजा हात पार्न सकिनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् ।
विलाशी तथा भौतिक वस्तुको प्रयोग गर्न पाईनेछ । व्यापार व्यवसायबाट मनग्गे धन आर्जन हुने तथा व्यवसायकै शिलशिलामा लामो दुरिको यात्रा हुनेछ । साँझपख प्रेममा अविश्वास बढ्ने योग रहेको छ ।
पुराना विवादहरु साम्य हुनेछन् भने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा फैसला हुनेछन् । पढाई लेखाईमा प्रतिस्पर्द्धीहरुलाई किनारा लगाउँदै उत्कृष्ट नतिजा तपाईको हातमा पर्नेछ ।
माया प्रेमका कोपिलाहरु फक्रनेछन् भने पति पत्नीको सहयोगले उपलब्धी मुलक कामहरु गर्न सकिनेछ । ऋण,रोग तथा शंकटको सामाना गर्ने शक्ती जुटाउन सकिनेछ ।
आकस्मिक धन,सम्पत्ती लाभ हुने तथा चिठ्ठा,उपहार प्राप्तीको योग रहेको छ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने पति पत्नी बीचको मायाको गाँठो कसिलो भएर जानेछ ।
सन्तान तथा छोराछोरिले तपाईको काममा भरपुर सहयोग तथा समर्थन गर्नेछन् भने सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउनेछ । विद्यामा उत्कृष्ट नतिजा हात लाग्ने तथा पुरस्कार तपाईकै पोल्टोमा पर्नेछ ।
आफ्नै भन्नेहरुले आश्वासन बाँड्ने तथा समयमा काम नगर्दिनाले समस्या पैदा हुनेछ । मन परेको मानिससँग टाडिनु पर्दा मन मुटुमा जलन पैदा हुनेछ ।
घरजग्गा तथा सवारी साधनको विषयमा विवाद गर्नुपर्ला । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको समर्थन भन्दा आलोचना नै धेरै हुनेछ । साँझबाट समय राम्रो रहकोले अध्ययनमा सुधार गर्दै नतिजा आफैँतिर पार्न सकिनेछ ।
राम्रा तथा परिणाममुखी काम हुनाले आफन्त तथा छिमेकीहरु प्रभावित हुनेछन् । पराक्रमी क्रियाकलापमा भाग लिई पुरुषार्थी काम गर्न सकिनेछ ।
लेख तथा रचनाको माध्ययमबाट संस्कार परिवर्तन गर्न तपाईको भूमिका महत्वपुर्ण रहनेछ । अध्ययनकै सवालमा यात्रा हुनेछ ।
भाग्यले साथ दिने हुनाले व्यापार फस्टाएर जानेछ । प्रेममा नजिक हुन सकिनेछ । साँझपख राजनीतिज्ञ र घर जग्गाको कारोबार गर्नेहरुका लागि समय मध्यम रहेको छ ।
व्यापार बढ्नुको साथै आम्दानीमा बढोत्तरिको योग रहेको छ । पारिवारिक जमघटमा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नुको साथै रमाईलो वातावरण समय व्यतित गर्न सकिनेछ ।
गायन तथा कलाकारीता क्षेत्रमा समय लगानी गर्नेहरुले नाम तथा दाम दुवै कमाउन सक्नेछन् । साँझपख यात्राको गतिलो योग रहेको छ भने न्यायिक निर्णय तपाईकै पक्षमा हुनेछन् ।
विशेष अवसरमा आकर्षक उपाहार प्राप्त हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ भने नयाँ लगानीको अवसर आउनेछ ।
ईमान्दारिता र मिहेनतले आत्म विश्वासमा वृद्धि हुनेछ । अध्ययनमा भनेजस्तो प्रगति गर्न सकिने हुनाले ज्ञानको भण्डार बढ्नेछ । प्रेममय वातावरणमा समय व्यतित गर्न पाउँदा मन हर्षित हुनेछ ।
समय तथा कामको तालमेल नमिल्दा अरुभन्दा पछि परिनेछ । अध्ययनमा मन नजानाले नतिजा अरुकै पोल्टोमा पर्नेछ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्यमा समस्या आउने तथा औषधी उपचार खर्च बढ्नेछ ।
बसाई सराई तथा लामो दुरिको यात्राको तय हुनेछ । विदेशी लगानीबाट सञ्चालित संस्थामा काम पाईनेछ । साँझबाट समय राम्रो रहेकोले प्रेममा नजिक हुन सकिनेछ ।
व्यापारी, विद्यार्थी तथा सामाजिक काम गर्नेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ ।
स्रोत साधन जुट्नाले कार्यक्षेत्रमा राम्रा काम गरी नाम कमाउन सकिनेछ । लामो समयदेखि रोकिएर बसेका कामहरु सम्पादन हुने तथा कार्य क्षेत्रमा नयाँ जिम्मेवारी थपिनेछ ।
व्यापार व्यवसाय फस्टाउनाले आम्दानी बढ्नेछ । अध्ययनमा सुधार हुने तथा भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ । माया प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समय उत्तम रहेको छ ।
राजनीतिज्ञ तथा समाजसेवीहरुले जनताको कामगरी पद प्राप्त गर्न सक्नेछन् । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने हुनाले मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ ।
कार्यक्षेत्रमा प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । ईमान्दारिता तथा लगनशिलताको उच्च मुल्याङकन हुनेछ । पढाईलेखाईमा मन जाने तथा नतिजा हात पार्न सकिनेछ । प्रेमको डोरो कसिलो हुनेछ ।
प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समय उत्तम रहेको छ । पढाई लेखाई कै सन्द्रर्भमा लामो दुरिको यात्रा हुनेछ । धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमा समय लगानी गरी अरुको सेवा गर्ने अवसर जुर्नेछ ।
कोल्हबी नगरपालिकामा बिद्यालय पुनः सन्चालन गर्न निर्देशन